Zavatra 7 momba an'i Covid-19 izay manahy indrindra ny mpitondra orinasa
London (CNN Business) Ny famerenam-potoana maharitra dia ny ahiahy lehibe indrindra ho an'ny mpanatanteraka orinasa rehefa misaintsaina ny fihenan'ny fihanaky ny coronavirus. Nefa be dia be ny fitazomana azy ireo amin'ny alina.
Ny mpanatanteraka izay ny asany dia ny mombamomba ny risika dia miahiahy ihany koa amin'ny trangam-bola mifandraika amin'ny fatiantoka, ny haavoan'ny tsy fananan'ny tanora ary ny fitomboan'ny fanafihana an-tserasera vokatry ny fiovana mankany amin'ny asa lavitra, hoy ny tatitra nataon'ny Forum Economic Economic (WEF), Marsh & McLennan sy Zurich Insurance Group.
Ireo mpanoratra dia nanadihady matihanina 350 ho an'ny zokiolona mety hitranga amin'ny orinasa lehibe manerana an'izao tontolo izao. Araka ny tatitra, navoaka tamin'ny Talata, ny ampahatelon'ny mpamaly no nahitana lisitra fihaviana manerantany izay mahasosotra "risika" miatrika ny orinasan'izy ireo. Nanoratra ihany koa ny mpanoratra ny tatitra fa nitombo ny tsy fitoviana, ny fahalemen'ny fanajana ny toetr'andro ary ny fampiasana ny teknolojia satria misy loza ateraky ny valan'aretina Covid-19.
Ny fanadihadiana natao dia tao amin'ny roa herinandro voalohany amin'ny volana aprily.
Mikatsaka ny hanafoana ny toekaren'izy ireo tsy ho tratran'ny koronavirus, fanokafana indray ny orinasa, sekoly ary fitaterana ny mpanao politika manerana izao tontolo izao, raha mametra ny loza mety hitranga amin'ny areti-mifindra faharoa izay mety hanery ny fanakatonana vaovao.
Ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena dia nilaza tamin'ny volana lasa teo fa manantena ny GDP eran-tany dia hihena hatramin'ny 3% amin'ny 2020, ny fahantrana lalina indrindra ara-toekarena hatramin'ny Fahakiviana lehibe tamin'ny taona 1930.
"Ny hetsika ara-toekarena nihena Covid-19, nitaky vola amina tapitrisa dolara ho valin-kafatra ary mety hiteraka fiovan'ny rafitry ny toekarena manerantany ho lasa, satria ny firenena dia mikasa ny hamerenana sy ny fifohazana," hoy ny mpanoratra ny tatitra WEF.
"Ny fanamboarana trosa dia mety hampihena ny teti-bolam-panjakana sy ny fifandanjan'ny orinasa mandritra ny taona maro ... ny toekarena mivoatra dia tandindomin-doza ny fandevenana amin'ny krizy lalindalina kokoa, raha toa ny orinasa dia mety miatrika fanjifana mihoa-pampana, famokarana ary lamina hafa," hoy izy ireo. , manondro ny ahiahin'ireo mpanatanteraka ny fatiantoka be dia be sy ny fanamafisana ny indostria.
Manantena ny IMF ny trosa ataon'ny governemanta amin'ny toekarena mandroso ho lasa 122% amin'ny GDP amin'ity taona ity avy amin'ny 105% tamin'ny 2019. Ny fahalemen'ny toerana ara-bola amin'ny toekarena lehibe dia ahiana ho an'ny 40% amin'ireo ekipa mpanadihady natao, niaraka tamin'ny mpanoratra nanoratra ny soso-kevitra. mety hitarika ho amin'ny vanim-potoana vaovao eo amin'ny fahazotoana na ny fitsangatsanganana hetra.
Raha nanontaniana momba ny ahiahy lehibe momba an'izao tontolo izao ireo dia niresaka momba ny haavon'ny tsy fananana asa ara-drafitrasa, indrindra eo amin'ny tanora, ary ny fipoahan'ny krizy maneran-tany amin'ny Covid-19 na areti-mifindra hafa.
"Ny valanaretina dia hisy fiantraikany maharitra, satria ny tsy fananana asa ambony dia misy fiantraikany amin'ny fahatokisan'ny mpanjifa, ny tsy fitoviana ary ny fahombiazana ary ny fanamby ny fahombiazan'ny rafitra fiarovana ara-tsosialy," hoy i Peter Giger, lehiben'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Zurich tao anatin'ny fanambarana.
"Miaraka amin'ny fanerena lehibe momba ny asa sy ny fanabeazana - mpianatra mihoatra ny 1,6 miliara no tsy nandia an-tsekoly nandritry ny tazomoka, dia miatrika loza mety hitranga amin'ny taranaka iray very isika. Ny fanapahan-kevitra raisina ankehitriny dia hamaritra hoe manao ahoana ny loza sy ny fanararaotana," hoy izy.
Raha ny firaisankina namboarin'ny valizy coronavirus dia manome ny fahafaha-manao "fananganana fiarahamonina misimisy kokoa, fitambaran'olona ary mitovy", araka ny filazan'ny mpanoratra, ny tsy fahatomombanana ara-tsosialy nipoitra noho ny fitomboan'ny tsy fitoviana ary ny tsy fananana asa dia krizy mipoitra miatrika ny toe-karena eran-tany.
"Ny firongatry ny asa lavitra ho an'ny mpiasa mahay dia mety hiteraka tsy fahaizana mandanjalanja amin'ny tsenan'ny asa ary vola mitombo ho an'ireo izay mahay indrindra amin'ny finday," hoy izy ireo.
Efa misy ny porofo manaporofo fa ny mpiasa ambany sy ny mpiasa mpifindra monina dia miha-pahavoazan'ny fihenan'ny toekarena amin'ny fepetra raikitra.
Hitan'ny tatitra ihany koa fa mety hihamafy ny fivoaran'ny fanoloran-tena amin'ny tontolo iainana. Raha ny fomba fiasa sy fihetsika vaovao amin'ny fanaovana dia dia mety hanamora ny fanarenana ny karbônina ambany kokoa, "ny fanesorana ny faharetan'ny faharetana amin'ny ezaka fanarenana na ny fiverenany amin'ny toekarena manerantany amin'ny fitrandrahana an-tsokosoko", hoy ny mpanoratra.
Mampitandrina izy ireo fa ny fiankinan-doha bebe kokoa amin'ny teknolojia sy ny fandefasana haingana haingana amin'ny vahaolana vaovao, toy ny fanaraha-maso ny fifandraisana dia afaka "fanamby ny fifandraisan'ny teknolojia sy ny fitantanana," izay misy fiantraikany maharitra amin'ny fiarahamonina na ny tsy fampiasana.